Mitady Mpanoratra Tetikasa ho an’ny tetikasam-pikarohana andraisan’ny maro anjara ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Mitady Mpanoratra Tetikasa ho an'ny tetikasam-pikarohana andraisan'ny maro anjara ny Global Voices
Tetikasa mifantoka amin'ny fiarovana, fanamby ary hirika ho vondrom-piarahamonim-piteny
Voadika ny 24 Febroary 2022 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, English
Ny Rising Voices, hetsiky ny Global Voices ho amin'ny fampiatiana ankihy (nomerika), dia mitady mpanoratra manantalenta zatra amin'ny fampiarahana fomba fikarohana maro mba hanampy amin'ny fampitàna ireo tsikaritra amin'ny tetikasam-pikarohana nandraisan'ny maro anjara antsoina hoe “Ny filàn'ny vondrom-piarahamonina vazimba sy ny fiteny vitsy an'isa hahazoana teknolojia azo antoka.”
Kinendrin'ny tetikasa fikarohana ny hanohana ireo mpikamban'ny tambajotran'ireo mpikatroka ankihy ao amin'ny Rising Voices amin'izao fotoana miasa eo anivon'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany, vitsy an'isa, na manana fiteny tsy ampy votoaty an'aterineto amin'ny famantarana ny filàny ara-piarovana ankihin'ny fitenim-piarahamonina eo an-toerana; mametraka laharam-pahamehana amin'ny raki-piainana an-takonana sy ny fiarovana azy, ny fifandraisana sy ny fisoloam-bava; ary fanairana sy fanetsiketsehana ny vondrom-piarahamonin-dry zareo mba handray andraikitra amin'ireo laharam-pahamehana ireo.
Ho an'ity dingana amin'ny tetikasa ity, hifidy mpikaroka 18 avy any Amerika Latina, Azia ary Afrika izahay izay hamory angon-drakitra momba ireo fanamby, hirika ary ny filàn'ny fitenim-piarahamonin-dry zareo eo amin'ny lafiny fiarovana sy fahazoana antoka ara-dizitaly. Hiara-hiasa amin'ny ekipan'ny tetikasanay ny mpikaroka tsirairay mba hamokarana tatitra izay hanome ny lasitr'ireo lahatsoratra miisa 18 hosoratan'ny Mpanoratra Tetikasa ary havoaka amin'ny Global Voices. Ho adika amin'ny fiteny mifandraika aminy ireo lahatsoratra ireo avy eo mba handraisan'ireo vondrom-piarahamonina ireo anjara bebe kokoa.
Hiara-hiasa amin'ny mpanefy-bika ato aminay ihany koa ny Mpanoratra Tetikasa amin'ny famokarana sarim-panazavana miisa 18 (iray isaky ny fandalinana tranga tsirairay), mandray anjara amin'ny tsirin-kevitra sy lahatsoratra hampiasaina amin'ny tefy-bika. Ankoatra izay, hanampy amin'ny ezaka lehibe fanaparitahana ireo lahatsoratra sy sarim-panazavana ny Mpanoratra Tetikasa.
Ireto avy ny andrakitry ny Mpanoratra Tetikasa:
Mandray anjara amin'ny fivoriana isan-kerinandro miaraka amin'ny ekipan'ny tetikasa
Manao tolo-tanana amin'ny fanomanana ny maodelin'ny tatitra momba ny fandalinana tranga
Manao tolo-tanana amin'ny fandinihana ny drafitry ny tatitra fandalinana tranga sy ny fanomezana domberina alohan'ny handefasana ny kinova farany
Famakafakana sy fandrindrana ny lahatahiry voaangona ary aseho amin'ny endrika tatitra nataon'ireo mpikaroka fandalinana tranga
Mamokatra sy mamoaka lahatsoratra miisa 18 ato amin'ny Global Voices (teny 1500 eo ho eo ny tsirairay)
Miara-midinika sy mampiaty ireo domberina sy fanehoan-kevitr'ireo mpikaroka tetikasa sy ny mpitarika ireo mpikaroka
Miara-miasa amin'ny mpanefy-bika ara-maso mba hanampy amin'ireo fitaovana ara-maso miaraka aminy
Mamoaka fanambaràna an-gazety, lahatsoratra amin'ny fampielezana media sosialy, ary lahatsoratra roa fanampiny mampiroborobo ny tsikaritry ny tetikasa
Ny kandidà mahomby ho an'ity asa ity dia:
Manana fahaizana matihanina amin'ny fanoratana sy fanitsian-dahatsoratra, ary mahay mampiasa ny fitaovana fanaovan-gazety sy akademika
Manana fidirana azo antoka amin'ny fifandraisana aterineto haingam-pandeha
Manana fahafahana hiasa amin'ny tontolo isan-karazany sy maro kolontsaina ary miaraka amin'ny olona manana traikefa samihafa
Afaka miasa mahaleotena sy miaraka amin'ireo ekipa miparitaka miasa manerana ny faritra maro tsy mitovy ora
Mahafolaka tsara ny teny anglisy (tsara kokoa raha mahay teny Espaniola antonony na ambony)
Tombony ny fahaizana mikirakira ny sehatra WordPress
Asa tapak'andro mifototra amin'ny fahavitan'ny asa mila vitaina sy ny rahaarha atao eo anelanelan'ny tapaky ny volana Marsa sy Aogositra 2022 ity asa ity. Hatao mandritra ny volana Mey sy Jiona ny ankamaroan'ny fanoratana.
Tsy misy fepetra ara-jeografika mifandraika amin'io asa io. Mariho azafady fa tsy manana birao na foibe hita vatana ny Global Voices. Tsy maintsy zatra tsara amin'ny fandaminana ny fandaharam-potoanany manokana, mameno ny fe-potoana ary miasa amin'ny tontolo virtoaly feno ny mpifaninana.
Tianay kokoa raha kandidà avy any ivelan'i Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana ny mpifaninana ary mamporisika ny olona mandray anjara ankehitriny amin'ny Global Voices mba hametraka fangatahana.
Raha hametraka fangatahana:
Alefaso mailaka ny CV (teny anglisy), taratasy amin'ny teny anglisy milazalaza ny momba anao manasongadina ny asanao sy manazava ny antony hoe ianao no sahaza amin'io andraikitra io. Mandefasa santionany tamin'ny asasoratrao tsara indrindra, na amin'ny endrika PDF na miaraka amin'ny rohy URL. Alefaso azafady any amin'ny rising@globalvoices.org, miaraka amin'ny loha-hevitra: Project Writer: [ny anaranao].
Ny fara fandraisana ny fangatahana dia amin'ny 8 Marsa 2022 amin'ny 11:59 alina ET (GMT-5)